လူသားတွေကို အကျိုးပြုမယ့် စက်ရုပ်လေး F.R.E.D.I. - MoviesFan Reviews
လူသားတွေကို အကျိုးပြုမယ့် စက်ရုပ်လေး F.R.E.D.I.
ချမ်းအေးလှတဲ့ ဒီဇင်ဘာလကာလလေးအတွင်းမှာ ကိုယ်ရဲ့သားသားမီးမီး တူတွေတူမလေးတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အနားယူမယ်ဆိုရင်တော့ F.R.E.D.I. ဇာတ်ကားလေးကို မမေ့နဲ့နော်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ ကလေးအကြိုက် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်လို့ ဒီကားလေးဖွင့်ပြထားလိုက်ရင် ကဲပေ့သောင်းကျန်းပေ့ဆိုတဲ့ ကလေးတွေပါ ငြိမ်ကျသွားပြီး ဇာတ်ကားထဲမှာ စီးမြောသွားကြပါလိမ့်မယ်။
F.R.E.D.I. ကားလေးက ကလေးအကြိုက်ဇာတ်ကားဆိုပေမယ့်လည်း Adventure, Family, Sci-Fi အမျိုးအစားလေးဖြစ်လို့ လူကြီးတွေလည်း အပန်းဖြေကြည့်ရှုရင်း ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါသေးတယ်။ မေလ ၃ ရက်နေ့ကမှ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်လို့ ဇာတ်ကားက အရမ်းလည်းမဟောင်းသေးပါဘူး။ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Kelly Hu, Angus Macfadyen, Candace Cameron Bure တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး ဒီဇာတ်ကားကို နာမည်ကြီး Movies Websites တချို့မှာလည်း မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ထားကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားက F.R.E.D.I. လို့ ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ်လေးတစ်ရုပ်အကြောင်းကို အခြေခံထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ။ သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေ လူတွေကိုအကျိုးပြုစေနိုင်မယ့် စက်ရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကို ဖန်တီးခဲ့ပေမယ့်လည်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူက အယူအဆလွဲမှားပြီး စက်ရုပ်ကို စစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာ တိုက်ခိုက်ရေးအားသန်တဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်အဖြစ် အသုံးချဖို့ ကြံစည်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြံအစည်တွေကို သဘောမကျသူ တီထွင်ပညာရှင်က စက်ရုပ်လေး F.R.E.D.I. ကို မသမာသူတွေ လက်ထဲမရောက်သွားစေဖို့ တောထဲတစ်နေရာမှာ ဖွက်ထားခဲ့ရာ ကျောင်းသားအရွယ် ကလေးနှစ်ဦးက တွေ့သွားခဲ့ပြီး သူတို့အိမ်ကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ လူထုတွေကို အကျိုးပြုဖို့ ဖန်တီးထားတဲ့ စက်ရုပ်လေး တကယ်ပဲ လူတွေကို ကူညီနိုင်မှာလား ဒါမှမဟုတ် မသမာသူတွေလက်ထဲကို ရောက်သွားပြီး တိုက်ခိုက်ရေးစက်ရုပ်ပဲ ဖြစ်သွားမလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားစဖွယ် ကြည့်ရှုသွားရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Action & Adventure, Family, Hollywood, Science Fiction
Previous Post: Netflix ကနေ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မယ့် Indiana Jones ဇာတ်ကားများ
Next Post: ခပ်ဆိုးဆိုးမင်းသားနဲ့ တောသူမလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း Top Star Yoo Baek